‘उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ’ | Business and Economy of Nepal
‘उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ’
Posted on May 14, 2012 by Babukrishna
तत्कालीन नेपाल ग्रिनलेज बैंक (हाल स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) बाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उपेन्द्र पौडेल हाल नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष छन् । बैंकिङ सेवामा प्रवेश गर्नुअघि उनले सोल्टी होटलमा काम गरेका थिए । वित्तीय संस्थाबाट स्तरोन्नति भएर बनेको पहिलो वाणिज्य बैंक एनएमबीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलसाग सौर्य दैनिकका बाबुकृष्ण महर्जनले गरेको कुराकानी :
उपेन्द्र पौडेल– प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनएमबी बैंक
समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थालाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
सबभन्दा ठूलो कुरा बैंकिङ क्षेत्रमा व्यावसायिकता विकास भएर गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले ग्राहक र बैंक सञ्चालक दुवै पक्षमा बैंकिङ जागरण र सक्षमता बढेको छ । विगत वर्षमा जसरी बंकिङ क्षेत्र तरलताको समस्याबाट गुज्रियो र त्यसबाट हामीले धेरै पाठ पनि सिक्याँ। त्यतिबेला बैंकिङ क्षेत्र धेरै डराएको अवस्थामा थियो ।
राम्रोसँग तरलता समस्याको समाधान नभएको भए अहिले के हुन्थ्यो भन्न गार्‍होस्थिति थियो । तरलताको सवालमा बंकिङ क्षेत्रले सुरक्षित अवतरण गरेको छ । अब अगाडि बढ्दा चाहिँ एकदम संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हुनसक्ने खतराबाट भने अझै यो क्षेत्र मुक्त हुन सकेको छैन । बैंकमा सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व व्यवस्थापन गरी दुइटा प्रमुख मुद्दा हुने गर्दछन् । नेपाली बैंकिङ परम्परागत रूपमा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा मात्र बढी झुकाव राख्थ्यो । दायित्व व्यवस्थापनमा चाहिँ खासै ध्यान गएको थिएन । यही कारणले विगत दुई वर्षमा तरलताको समस्या आयो ।
बैंकिङ क्षेत्रमा अझै समस्या छ भन्नुको अर्थ विगतमा गैरवित्तीय र विशेषगरी अस्थिर राजनीतिका कारण उद्योगधन्दा राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्दा त्यस क्षेत्रमा गएको ऋणको समस्याले यस्तो स्थिति आउन गयो । विगतमा अर्थतन्त्रको वृद्धि चाहिँ सन्तोषजनक नहुने तर बंैकिङ क्षेत्र भने फस्टाइरहने जस्तो हुनै नसक्ने कुरा भयो । यी त एक अर्काका परिपूरक हुन् । यही परिप्रेक्ष्यमा कतिपय क्षेत्रमा भएका लगानीको सुरक्षामा भने चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति अझै विद्यमान छ । उदाहरणका लागि भन्नुपर्दा रियलस्टेट क्षेत्रमा गएको लगानीको अझै समस्या छ र यसबाट बैंकिङ क्षेत्रले पार पाइसकेको छैन ।
विगत दुई वर्षका तुलनामा भन्दा अहिले दायित्व व्यवस्थापन धेरै हदसम्म सहज भइसकेको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापनमा अझै पनि समस्या छ । कर्जा लगानीको व्यवस्थापन र तरलता कोषको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेको छैन । बैंकको कोष मुख्यतया सेयरधनीको पैसा र निक्षेपकर्ताको रकम संकलन गरेर जम्मा हुन्छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्न पाइन्छ । सिडी रेसियो ८० प्रतिशत हुँदा त्योभन्दा मुनि नै बसेर बैंक सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । २० प्रतिशत अंश मात्र लगानी गर्ने हो ।
रियल स्टेटमा गएको कर्जा उठ्न सकेको छैन, यसको उचित समाधान तपाईंले के देख्नुभएको छ ?
रियल स्टेटका ऋणसमस्याको समाधान भिन्न तहमा भिन्न हुन सक्छ । तत्कालको समाधान भनेको रियल स्टेटको कारोबारलाई अझै तीव्र पार्नु नै हो । कारोबारलाई तीव्र पार्नको लागि रियल स्टेट डेभलपरले पनि केही कम मूल्यमा आफ्नो जग्गाजमिन बेच्न तयार हुनुपर्छ भने बंैकिङ क्षेत्रले पनि यस क्षेत्रमा गएको कर्जामा अलिक कम ब्याज लिन तयार हुनुपर्छ ।
मेरो विचारमा काठमाडौंमा जति पनि रियल स्टेट बनिरहेका छन्, त्यसको माग प्रशस्तै छ । माग हुँदाहुँदै पनि अत्यधिक बैंक ब्याजका कारण तिनले धान्न सक्ने अवस्था नदेखेर किन्न आँट गरिरहेका छैनन् । बजारले एउटा के पाठ सिकिसकेको छ भने कुनै पनि बेला ब्याजदर भन्ने कुरा माथि जान सक्छ । अहिले घटेको ब्याजदर भोलि बढ्दैन भनेर विश्वस्त हुन सक्ने आधार छैन । देशमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताका कारण मानिसको आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन । अर्को मनोविज्ञान के पनि छ भने घरजग्गाको भाउ अझै घट्छ भन्ने मानिसमा परेको छ । त्यसैले पनि मानिसहरूले जग्गाको किनबेच नगरी ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा बसिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले पनि आफ्नो ब्याजदर अलिकति घटाइदिने र डेभलपरले पनि आफूलाई चलायमान बनाउनका लागि थोरै मात्र नाफा खाएर रियल स्टेट क्षेत्रलाई चलायनमान बनाउनु जरुरी छ ।
सेयर बजारलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
अहिलेको सेयर बजारमा विभिन्न कम्पनीको सेयर मूल्य एकदम कम छ । बजारले जुन किसिमको प्रतिफल दिइरहेको छ, त्यो प्रतिफलका आधारमा देशको अर्थतन्त्र स्थिर हुने हो र राजनीति स्थिर हुने हो भने अहिलेको तहभन्दा धेरै माथि सेयर मूल्य पुग्ने देखिन्छ । त्यस हिसाबले बजारले राजनीतिक स्थायित्व हुने केही संकेत पाउनेबित्तिकै माथि जानुलाई आधारहीन तवरले माथि गएको चाहिँ म भन्दिनँ । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढेर नै बजार माथि गएको हो र यो जानु पनि पर्छ । जुन तहमा नेपालको सेयर बजार पुग्यो, त्यही तहमा धेरै बस्न सक्ने स्थिति पनि थिएन । अहिले सकारात्मक सन्देश मात्र आउँदा त बजारले यस्तो सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छ भने भोलि गएर साच्चिकै संविधान बन्यो र असहमतिमा रहेका मुद्दामा सहमति कायम भयो भने बजार कति माथि पुग्ला भन्ने कुरा तपार्इं/हामीले सहजै अनुमान लगाउन सकिने कुरा हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशित लगानी नीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्तिका नाताले हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ भनेर त भनिरहेका छौँ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएन भने गुणात्मक असर देख्न सकिंदैन । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै किसिमको विवाद छैन ।
बैंकिङ क्षेत्रले जहाँजहाँ सम्भावना छन् तिनको पहिचान गरेर लगानी गर्दै आइरहेको छ । कार्पेट, तयारी पोसाक, पर्यटन क्षेत्रआदि बंैकिङ क्षेत्रले लगानी गर्दै आएकै हो । द्वन्द्व सुरु भएपछि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी ठप्पै बन्द भयो । सन् २००० पछि विशेष गरी जलस्रोत क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गर्दै आएको छ ।
जनताको निक्षेप लिएर सुरक्षित प्रतिफल आउने ठाउँमा नै बैंकले लगानी गर्न खोज्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले जाऔँ भनिरहनै पर्दैन । तर जे भने पनि निर्देशित ऋण लगानीको पक्षमा भने बैंकरर्सहरू छैनन् । बैंकले जुन क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको छ, त्यसै क्षेत्रमा लगानी गर्छ । विगतमा पनि सबै बैंकले कार्पेट क्षेत्रमा लगानी गरेका थिएनन् नि । जुन बैंकले राम्रोसँग त्यसको जोखिम बुझेका छन् तिनले मात्र लगानी गरेका थिए ।
निश्चय पनि कृषि प्रधान देश भएका हिसाबले बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । तर, सिंचाइ, उन्नत बिउवीजनलगायतको उचित प्रबन्ध सरकारी क्षेत्रले गरिदिनुपर्छ । कृषकमा व्यावसायिकताको विकास गराउन उचित पहल गर्नुपर्छ ।
« वित्त कम्पनीको निक्षेप वृद्धिदर नकारात्मक वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्यो »